Dagaal ka dhacay Baledweyne & maamulka oo yiri “Lama horjoogsan karo horumarka” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Waxaa maalintii labaad saaka magaalada Baledweyne, gaar ahaan Xaafadda Howlwadaaf ku dagaallamay labo maleeshiyo beeleed, waxaana dagaalkaas ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira.
Dagaalkii shalay ayaa waxaa ku dhintay ilaa saddex quur, halkaas dagaalkii saaka la sheegay iney ku dhaawacmeen labo ruux oo la dhigay Isbitaalka Baledweyne.
Maamulka gobolka Hiiraan, oo u warramay Radio-ga doiwladda Soomaaliya ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaal beeleedyadaas, iyadoo guddoomiyaha gobolkaas, Cabdifataax Xasan Afrax uu sheegay inay jiraan colaado ragaadiyay horumarka gobolka.
Gudoomiyaha ayaa ku baaqay in bulshada gobolka ay Maamulka gacan ku siiyaan sidii looga hortagi lahaa falalka nuucaasi oo kale ah.
“Waxaa nala gudboon in aan maanta kaddib ka xishoono in maleeshiyaad hubeysan ay ishortaag ku sameeyaan horumarka uu gobolka ku talaabsanayo, tankale ninkii dad dila markasta waa dambiile, anaguna haddii aan qabano cadaaladda ayaa la marsiinayaa, tan kale maleeshiyaadka qabiilka u hubeysan way soo noqdeen, mana ogolaan doono in maleeshiyaad hubeysan ay gobolka dhibaatooyin ka geystaan”ayuu yiri Guddoomiyaha.
Cabdifataax Xasan Afrax ayaa sheegay in colaadaha soo laa laabtay ay gobolka saameyn badan ku yeeshaan, isagoo intaa ku daray in Maamulka ay u qorsheysantahay in uu ka shaqeeyo horumarinta iyo dib u soo celinta adeegyada guud ee bulshada.
“Xaafadda Howlwadaag iyo qeybtii ay ka dhacday dhibta, waxa ay xaq u leeyihiin inay helaan horumarka socda, laakiin ma ogolaaneyno in maleeshiyaad hubeysan ay carqalad abuuraan, waxaana xoogga saareynaa in dhamaan xaafadaha degmada iyo kan gbolka ka hirgelino mashaariic horumarineed” ayuu markale hadlakiisa ku daray Cabditafaax Xasan Afrax.
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan ayaa ka codsaday shacabka in ay gacan ka geystaan oo ay maamulka gobolka ku taageeraan sidii looga hortagi lahaa dadka doonaya in ay xanibaan mashaariicda horumarineed ee gobolka ka socda, ayna ka wada shaqeeyaan xalinta colaadaha.